U-ELENA BELLE, INTOMBI KAGLEB SAVCHENKO: IINYANI EZI-5 EZIKHAWULEZAYO - IINDABA
U-Elena Belle, intombi kaGleb Savchenko: Iinyani ezi-5 ezikhawulezayo
UGleb Savchenko ngumdanisi oqeqeshiweyo ixesha elide ekuDaniseni kunye neenkwenkwezi, nangona kunjalo uku ubudlelwane bakhe obutsha bokuthandana ixesha elide? Umdanisi waseRussia ohlukane no-Elena Samodanova, iqabane lakhe elineminyaka eli-14, ukuwa okokugqibela. Ngoku ulwalamano olutsha kraca - nomnye uElena.
U-Savchenko wahlekisa ngothando lwakhe olutsha kwi-ET ngokwabelana ukuba unomhlobo omangalisayo owaziwa njenge kinda.
Nantsi into ekufuneka uyifundile malunga nentombi entsha kaSavchenko, u-Elena Belle.
1. U-Elena Belle yiModeli kunye neNyaniso yeNkwenkwezi
U-Elena Belle wazalwa ngu-Natacha Peyre ngo-1985 e-Ibiza, kwii-Balearic Islands, eSpain Requena, ngokuhambelana ne-IMDb. Usebenza njengemodeli kwaye inkwenkwezi yokwenyani icingelwa isikhundla sakhe ngaphakathi kwengqokelela ye-2005 yaseSweden iParadesi yehotele, eyamkele indawo yokuhlala yabantu abangatshatanga kwindawo yokuhlala entle.
Ngokuka-Expressen, u-Belle waqhekeka eSweden esebenzisa ukuqala kwakhe ukuchonga, kwaye ngo-2009 wafudukela e-United States ukuya kusebenza e-Hollywood njengemodeli engezantsi kwe-Elena Belle.
Kwiphepha lakhe lewebhu le-Instagram, u-Belle uveza imifanekiso yakhe yokumodela njengoko ebonisa yonke into evela kwiimpahla zokudada ukuya kwiChanel. Kwinqaku lokuthetha ngefoto yangaphantsi ebhalwe u-Belle ebhalwe ngobuqhophololo, Ndidiniwe ngabantu abandithandayo ngenxa yomlinganiswa wam, uSavchenko wabhala, nam ndinje ngawe.
2. Wadlala inkwenkwezi kumdlalo waseSweden 'Wabafazi Basekhaya'
U-Belle ulilungu elinexesha elide e-Svenska Hollywoodfruar, etolika kwi-Swedish Hollywood Women. Umboniso wokoqobo ujikeleza amantombazana amnandi aseSweden atshatele kubayeni abazizityebi baseMelika.
Ngokwe-IMDb, ingqokelela yexesha elide yongeze umdlali weqonga u-Britt Ecklund kunye nomlingisi owayesakuba ngumlingisi u-Gunilla Persson.
3. I-Belle yayitshatile kwaye inomntwana
U-Belle wayetshatele kwisuphavayiza yomculo uMichael Theanne ukusukela ngo-2016 de kwasekulahlekelweni kwakhe bubomi ngo-2020. Isuphavayiza yexesha elide kaSteve Aoki kunye namagcisa ohlukeneyo e-EDM asweleka eblowu eneminyaka eyi-45 emva kokuwa kufutshane nendlu yaseLos Angeles abelana ngayo no-Belle kunye Intombi encinci, uLuna, ngokuhambelana neBillboard.
Emva kokuphulukana nobomi, u-Belle wahlawula umyeni wakhe ongasekhoyo kwi-Instagram kwaye wamchaza njengomhlobo wakhe omkhulu kunye notata ogqibeleleyo uLuna anokufuna.
4. I-Belle ikwadityaniswa ne 'Baywatch' Alum David Charvet
Ngaphezulu kweenyanga ezili-12 emva kokuphulukana nomyeni wakhe, uBhele waqatshelwa kunye nomlingisi uDavid Charvet. Ngo-Epreli 2021, imodeli yafotwa kunye neBaywatch alum e-LAX emva kokubuya kuhambo eTulum, eMexico, ngokuhambelana neDaily Mail.
Ngelixa u-Belle ngoku enxulunyaniswa no-Savchenko, kwi-Dancing With Stars crossover, uCharvet wayetshatile ngaphambili no-Brooke Burke, owayesebenza njengombambisi-mbambano kwi-ABC ye-celeb okhuphisana nayo ye-ballroom ukusukela ngo-2008 ukuya ku-2013.
gavin rossdale intombazana entsha
5.U-Belle waya kwiholide yokuthandana no-Savchenko kwaye babophelela abantwana babo
U-Belle mva nje uye kuhambo lothando lwe-spa kunye no-Savchenko eMiami. Umntu ongaphakathi wazisa i-ET ukuba isibini esitsha esitshatileyo sihleli kunye eCarillon Miami Wellness Resort emva kwendibano yokuqala ngoJulayi 4 ngumhlobo.
Bayonwaba kwaye bazimasa ukwazana, ubonelelo luchaziwe. Bazibophelela ngaphezulu kolutsha lwabo, njengoko elowo enabantwana abakwiminyaka efanayo. Gleb uthanda ukuba Elena mnandi, kodwa ukongeza uya kufumana imisebenzi yokuba umama okanye utata.
Olunye usasazo lwazisa iVeki ngeveki ukuba esi sibini sizonwabele kunyango lwe-spa kwaye sithanda izinto ezahlukeneyo kwindawo yokuphumla eneenkwenkwezi ezintlanu, kunye nomzimba wonke we-cryo, i-halotherapy, kunye nebhafu yetyuwa edadayo. Baye baxhoma ngaphandle iibhayisekile zokuqhuba kwindlela yebhayisekile kunye ne-lounging ngasechibini naselwandle, wongeza umntu ngaphakathi.
U-Belle wabelana ngeklip yevidiyo kolu hambo (kuboniswe ngasentla), eyamqinisekisa yena nendoda yakhe bangena ngqo kwi-sauna kuhambo lwabo lonke.
Kodwa imicimbi yayisele iqale ukufudumeza iiveki ezimbalwa ngaphambili kunendlela yokuqala yokubaleka ngokudibeneyo. Xa u-Belle wayetyelele eSpain ekuqaleni kuka-Agasti ka-2021, u-Savchenko waphawula kwiphepha lakhe le-Instagram nge, Buya kwakhona kum uswidi wam waseSweden.
Ngokukhawuleza sithandwa sam, waphendula.
Izigaba: Iwiki Amazon-Prime Iindaba
I-legacies yexesha le-3 idamon
Ngaba kuya kubakho ukuhanjiswa kweposi ngosuku lwe-columbus
USteve Taylor kaMaria Taylor
Iidemon zoosaziwayo baseMelika
inde kangakanani iJerry purpdrank